Mwari akati, “Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu”. Mwari akaita vanhu vaviri, murume nemukadzi
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mwari akati, “Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu”. Mwari akaita vanhu vaviri, murume nemukadzi
Mwari akati, “Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu”. Mwari akaita vanhu vaviri, murume nemukadzi
GENESISI 1:26 Mwari akati: Ngatiitei munhu nomufananidzo wedu,
Iyi inoita senhaurirano pakati peVanhu vaviri kana kudarika. Asi hapana kutaurwa kuti paive neVanhu vatatu vaivepo. Vaikwanisa kuva vari vaviri, kana kutivana kana kudarika.
Zvisinei sekutenda kwemaKristu mazhinji muhuMwari hweTiriniti, ngatitii Vanhu vatatu mukuzara kwohuMwari ndivo vaitaurirana nyaya iyi.
Pakarepo tinobva taona dambudziko risingakwanisi kugadziriswa nevanhu vanotenda kuTiriniti -- vanhu vaviri panyika havasi nenzira imwechete zvayo mufananidzo weVanhu vatatu Kudenga.
Rimwe dambudziko: Vanhu vatatu vese vari muhuMwari hweTiriniti ndevechirume. Pakati pavo vose hapana mukadzi. Saka mukadzi akazodaidzwa kuti Eva, haasi mufananidzo waBaba, kana Mwanakomana, kana Mweya Mutsvene.
Rimwe dambudziko nderekuti Mwari weTiriniti, anoitwa neVanhu vatatu, haana zita.
Zita raMwari Baba rinonyanya kuzivikanwa ndi Jehova. Zita raMwari Mwanakomana ndiJesu. Zita raMwari Mweya Mutsvene ndi ....? Hakuna anoziva. Hakuna zita muBhaibheri reMweya Mutsvene. Saka tine mazita maviri evanhu vatatu.
Vese Adamu naEva umwe neumwe aive nezita rake. Saka havasi mufananidzo weMweya Mutsvene usina kupihwa zita.
Zvinobva zvaomesesa kana tikaedza kutsvaga zita rimwechete rekupa Mwari anomiririrwa neVanhu ava vese vari vatatu muTiriniti. MaKristu anoramba achiti “muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene”, asi havagoni kutiudza kuti zita racho ndiyani. Izvi hazvigoneki. Saka nekuita Tiriniti, maKristu akarasikirwa nezita raMwari.
Rimwe dambudziko guru:
Mweya hauna chimiro kana mutumbi.
Hapana pakati pemurume Adamu kana mukadzi Eva, vane chimiro chemunhu, anogona kuva mufananidzo weMweya usingavonekwi.
Hatigoni kuona Mwari, saka nekudaro hatina ruzivo rwekuti Mwari anotaridzika sei.
Asi tinogona kutaura kuti hapana pakati paAdamu naEva, sevanhu vakaitwa nenyama, aive mufananidzo waMwari anova Mweya.
Pfungwa yeTiriniti yaizivikanwa zvakanyanya kumapegani ekuEgipita vaive navamwari vatatu pachigaro chimwechete sezviri pamufananidzo wezvinyorwa zvepamatombo izvi.
Zvakare kumaHindu akare, vaive nemisoro mitatu pamuviri mumwechete, sezviri pachivezwa chedombo ichi.
Muna 325 AD pakanzuru yeNecaea, uye muna 381 AD pakanzuru yeConstantinople, kereke yeRoman Catholic yakatanga dzidziso yeTiriniti vakaizivisa kumakereke echiKristu mukati menguva dzerima.
Kana mukatarisa Kudenga nhasi, hamungaoni Mwari Baba sezvo ari Mweya usingavonekwi.
Asi kuzara kwaMwari Baba kunogara Mumuviri waJesu (Col 2:9), Anodaidzwa kuti Mwanakomana waMwari. Tinogona kuona Mwanakomana waMwari, nekuti ane Muvuri mukukudzwa.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura akati kwavari: Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri; Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga, kana asingavoni baba vachichiita; nokuti zvose zvavanoita ivo Mwanakomana unozviita saizvozvo vo.
Mweya uri mumunhu ndiwo unotonga kuita kwemuviri wake.
Saka Mweya waMwari unoshamisa wairarama muna Jesu uchitonga Muviri wake wemunhu.
Bhaibheri harina kubvira radaidza Jesu kuti “Mwari Mwanakomana” nekuti Mwari ndiMweya saka haana kuitwa nenyama. Saka Jesu anodaidzwa kuti “Mwanakomana waMwari”, Munhu wenyama maari munogara Mweya waMwari Baba unoshamisa.
“Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu” zvinotsanangura kuita kwemifungo pakati pesimba rehunhu hwaMwari hwemunhu uye Mweya waMwari kuti tinzwisise zvinodiwa pazano remweya uye kuda kwaMwari kunoshamisa.
ISAYA 55:9 Nokuti denga sezvarakakwirira kukunda nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuvura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuvura ndangariro dzenyu.
Kufunga kwaMwari kuri pamusoro pekunzwisisa kwevanhu, Mwari aisarudza kuti angarerutsa sei mirangariro yake kuti awane hwaro hwekuti pfungwa dzevanhu dzigone kunzwisisa.
Kuita kwaMwari kunoshamisa kwaifanira kuuya zvakanyanya pasi pachidanho chekuti humunhu hwaMwari hunzwisise kuti Mweya unoshamisa unodei.
Hunhu hwaMwari hwakaratidzwa Mumuviri weMweya (“Theophany”) uyo waigara Mwari kuti aonekwe nevatumwa Kudenga.
Zvakadaro, Mweya waMwari unoshamisa waifanira kuderedza zvakaita sei ndangariro dzawo dzisingagoni kutsanangurika dzakadzama kuti dzinzwisiswe nehumunhu hwake. Hunhu hwakaita sei hunofanira kuvakwa mumweya wake wemunhu kuti pfungwa dzaAdamu dzinzwisise kufunga kwaMwari pahwaro hwakadzika kwazvo hwezaruriro yemunhu.
Saka Mweya Mutsvene ndiyani?
MATEO 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo tarira, mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota, akati: Josefa mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako; nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
MATEO 1:18 Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai: Maria, mai vake, wakati anyengwa naJosefa vasati vasongana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
Mweya Mtsvene wakaisa mbeu yehupenyu muchibereko chaMaria.
Chero munhu anoisa mbeu muchibereko chemukadzi ndiye baba vemwana iyeye.
Saka Mweya Mutsvene ndiwo Baba vaJesu.
Zvino Mweya Mutsvene waifanira kuva Mwari Baba sezvo Mwana wemunhu anofanira kuva naBaba vamwechete, kwete vaviri.
Mwari mutsvene (ndizvo zvaari) Mwari Mweya (ndiwo magariro ake).
Saka “Mweya Mutsvene” ndiko kutsanangurwa kwakafanira kwazvose kuita kwaMwari uye zvaari.
Mwari anogona kuzvitaudza here?
Tarisai kuti Bhaibheri rinotii pamusoro pevanhu vanozvitaudza.
MAPISAREMA 77:6 ... Ndinotaurirana nomoyo wangu; ...
Njere dzemunhu dzakaoma, dzinogona kutarisa mativi akawanda padambudziko, zvese panguva imwechete. Zvakafanana nekunge vanhu vakasiyana vachitaura mupfungwa vachidairana mazano avo.
NEHEMIA 5:7 Zvino ndakarangarira mumoyo mangu.
Nehemia akaita kuti nzvimbo dzakasiyana dzepfunga dzake dzitarise dambudziko kubva pamaonero akasiyana, uye dzichigovana mazano akasiyana ekugadzirisa dambudziko. Zvino akabva azosarudza kuti nderipi zano raive rakanakisa kuti ashandise. Kuzvipikisa pachake yakaita nzira yakanaka kuti agadzirise mafungiro ake paaifunga pamusoro pechinhu ichocho.
Kuzvitaudza kunoita kuti pfungwa dzako dzifunge zvakanaka.
Kufunga chinyararire kana kufunga mobva mataura zvamafunga ipapo kunobatsira munhu kuti awane chinangwa chezvaanenge achifunga. Zvinobatsira munhu kuti awane chirevo pamusoro pezvinhu.
VAROMA 2:15 ... Nokuti vanoratidza basa romurairo wakanyorwa mumoyo yavo, hana yavo ichipupura pamwechete nazvo, nezvavanofunga pakati pavo zvichivapa mhosva kana kuvapembedza;).
Saka vanhu vanozvitaudza kana kuti vanorangarira pachavo. Tinozvibvunza apo mazano akasiyana anoramba achiuya mupfungwa dzedu patinenge takatarisana nedambudziko. Tinobva tapokana nemoyo yedu sekunge tiri kutaura neumwe munhu, tinonzwa zvakanakisa kana moyo yedu nemafungiro edu zvichiwirirana nezvatinenge taita.
Albert Einstein aive mumwe wevanhu vaifunga kwazvo, aizvitaudza. Aive asiri munhu weruzhinji paaikura, aisarudza kuchengeta zvinhu mumoyo make.
Einstein.org yakashambadza kuti “aidzokorora mitsara yake achizvitaurira ega zvinyoro-nyoro.”
Ndatarisa mbatya dzangu pachivoni voni, ndikazvibvunza kuti ndaitaridzika zvakanaka here. Ndikazviyeuchidza kuti nditarise kuti ndatora makiyi emotokari here. Izvi zvinhu zvinoitika mazuva ose patinotaura tega.
Kurangarira chinhu chakakosha kupfungwa dzemunhu. Ndinogara pasi ndofunga pamusoro pezviitiko, ndozvibvunza kuti zvakafamba zvakanaka here kana kuti kwete.
Saka kuzvitaudza chinhu chinoitika zvakanyanya muvanhu .
Chinhu chinozivikanwa kwazvo apo munhu anozvitaudza achibuditsa mazwi chinotaurwa nevanhu vanoita nezvehutano hwemafungiro evanhu vanochidaidza kuti kuzvitaudza kunze. Zvinotibatsira kutarisisa pfungwa dzedu zvakajeka, sekunge tiri kure nadzo. Tichizvikurudzira nekutaurisa mukuita kunogaroitika, kunyanya kana tichizvidya moyo zvakanyanya.
Kana tichiedza kunyora mutsara wakanaka, tinogona kutaura mutsetse uyu tichidaidzira toshandura rimwe izwi kuti tinzwe kana zvichizonzwika zvakanaka.
Pfungwa dzemunhu dzakagadzirwa nenzira yakasarudzika zvekuti anokwanisa kuzvitaudza. Zvinogonesa munhu kutora nzvimbo mbiri, yemutauri neyeakateerera, zvisinei nekuti munhu uyu ane muviri mumwechete. Nzvimbo mbiri dzinotigonesa kugara pasarudzo mbiri panguva imwechete.
Uye “pfungwa” dzaMwari dakasarudzika uye dzakakwirira kukunda dzedu.
Tichiwedzera Mwari, paaive oda kusvika padombo rekuzarira kusika kwake, aida kuratidza kubwinya kwake uye hukuru hwake hwakakura kukunda kubwinya kwezvaakasika zvose.
Ngatitarisei “isu wehumambo” paWikipedia paintaneti: “Isu” wehumambo kana kuti huwandu hwehukuru kana kuti “kuwanda kwehukuru” kushandiswa kunoitwa zita riri muhuzhinji richireva munhu mumwechete anobata chigaro chepamusoro- soro, saMambo kana kuti mukuru wezvechitendero saPope kana bishopu.
Kudaidzwa muhuzhinji kwehukuru uku kunoratidza simba rake rese nekukudzwa.
Kana izwi rimwechete rikashandiswa kuratidza hukuru hwaMwari, zvinogona kuva zvakanaka asi zvisina kukodzera. Asi mambo anoshandisa huwandu hwehukuru kutsanangura simba rake rese.
Russian Tsar Mambo Alexander I akanyora kuti: “NeNgoni dzaMwari, Isu Alexander I, Mambo uye mutongi weVose maRussias ...”.
Madzimambo, maPope, mabishopu nevamwe vakadaro. Vanokwanisa kuzvitaura muhuzhinji sa “isu” kana kuti ‘tino”.
Iyi yaive nzira isina kujairika here yakamboshandiswa pakutaura namambo muBhaibheri? HONGU.
EZRA 4:11 Ndiwo mashoko enwadi yavakatuma kunamambo Atashasta.
Bhaibheri rakasimbisa kuti nwadi yaive yatumirwa kuna mambo. Kwaari iye ega. Kwete kuna mambo nevabatsiri vake.
Zvino tarisai mhinduro yake.
EZRA 4:17 Ipapo mambo akatuma mhinduro kuna Rehumi, mukuru naShimshai munyori, nedzimwe shamwari dzavo dzaigara Samaria napamwe mhiri kworwizi, achiti: Rugare ngaruve nemi, namamwe mashoko akadai.
18 Nwadi yamakatitumira, ndairavirwa zvakanaka.
Mambo akashandisa “ndai” anoreva munhu mumwechete na “ti” anoreva vanhu vazhinji. Madzimambo anotenderwa kutaura nenzira iyi, samambo wekuRussia (kana Tsar). “Huzhinji hwehumambo uhu” hunoreva kuti mambo ane kukudzwa kuzhinji uye simba risina izwi rinoreva munhu mumwechete rinogona kuritsanangura.
Saka kana mambo muBhaibheri akazvidaidza kuti “ti” anoreva vanhu vazhinji zvese na “nda” anoreva munhu mumwechete mumutsara umwechete, zvino Mwari, anova Mambo wedenga nenyika uye Mambo wemadzimambo, anokwanisa kuzvidaidza kuti “isu” kana kuti “ti”.
Tarisai kuti Mwari anoshandisa sei huzhinji nehumwechete pachiitiko chimwechete.
GENESISI 1:26 Mwari akati: Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu; ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
27 Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi.
Mweya wemunhu wakasikwa waive wemunhu rume, asi waive nehunhu hwechikadzi mauri. Izvi zvakakonzeresa huzhinji hwa “va” Eva aive asati ava munhu akazvimiririra panguva iyi.
Mwari Baba vaive Mweya unoshamisa, Mwanakomana waMwari waive Muviri weMweya (kana “Theophany”) waigara Mwari. Muviri weMweya uyu waizova munhu Jesu Kristu.
Saka “ngati” aireva zvese hunhu hwemweya unoshamisa uye hunhu hwaMwari hwemunhu (kana maitiro).
Asi nei Mwari akataura seizvi paakasika munhu?
Pakusika kwese Mwari aifara kutaura kuti
“Nzvimbo ngaivepo” .... iri raive denga kana makore.
“Nyika ngaimerese ...”.
“Zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga”.
Kwaive kutaura kwakareruka, kwakataurwa nekukasika, asi kuine simba guru.
Asi paakasvika pamunhu, Mwari akamira akatanga kurangana ari ega (sezvakaitwa naNehemia). Saka akatiratidza kuti aiisa nguva yake yese uye kufunga kwake kwese pachisikwa chake chekupedzisira. Izvi zvinopa munhu chinzvimbo uye chiremerera chakawedzerwa. Mwari akatora nguva yake achisika rudzi rwemunhu. Kufunga kwakadzama kwakaiswa pakusikwa kwemweya wemunhu, kuti ugogadzirwa nehunyanzvi kuti agova nesimba rekuzvisarudzira uye kuti agogonawo kunzwisisa kuda kwaMwari. Munhu aizova akakosha.
Saka rukudzo rwaMwari pamunhu rwaive rwekumusika nemufananidzo wake. Paive pasina chimwe chisikwa chaive pamusoro pemunhu.
Saka Mweya mukuru usina muganhu waMwari wakaita mweya muduku une muganhu waive wakangoita saIye.
Ngatitorei Mwari seRimi dzvuku reMoto.
Zvino mukati meRimi remoto iri mune nzvimbo (inomiririrwa nedenderedzwa dema mumufananidzo) rinomiririra humunhu hwaMwari hwese. Mwari Mweya unoshamisa, asiwo ane hunhu hwemunhu. Vanhu vaive mupfungwa dzaMwari kubva pakutanga paakanyora mazita avo mubhuku reGwaiana rehupenyu.
ZVAKAZARURWA 13:8 Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwaiana rakabaiwa kubva pakusikwa kwenyika.
Taive tiri muna Mwari neimwe nzira kubva pakutanga, kunyangwe tisina ndangariro dzenguva iyoyo. Maive muri munanababa venyu pavaive vaduku, kunyange musisazvizivi.
Mwari akabvunza Jobo kuti aivepi pakusikwa kwenyika.
JOBO 38:4 Iwe wakanga uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika?
MaKristu akazvarwa patsva vana vaMwari. Taive tiri munaMwari tichipururudza nemufaro apo taiona kuti musha wedu wenguva inouya, nyika, yaive ichisikwa.
JOBO 38:7 Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, vuye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro?
Abrahama paakapa Merkizedeki chegumi, muzukuru wake Revi akapururudza ari mukati maAbrahama, zvisinei nekuti haana ruzivo kana ndangariro dzechiitiko ichi.
VAHEBERU 7:9 Zvino tingati, naRevi, unopiwa zvegumi, iye vo wakapa zvegumi munaAbrahama.
10 Nokuti wakanga achiri muchivuno chababa vake, pakusongana kwaMerkisedeki naye.
Mwari aida kuisa hunhu hwake hwemunhu muvanhu vose vaaizoitira miviri yenyama munguva yaizouya. Hunhu hwake hwemunhu hukuru, aizohuisa muvanhu vakazvarwa patsva, vachadaidzwa kuti Mwenga wake.
Tichiona Mwari semufananidzo “weRimi dzvuku”, rine “denderedzwa dema” richimiririra hunhu hwake hwemunhu hwaaizoisa muvanhu vanozoumba kereke yake yechokwadi.
SakaMwari akaita Adamu semufananidzo wake.
Panguva iyi Adamu aive mweya wemunhurume waive “mufananidzo” kana kuti “mupimo” muduku pamweya waive Mweya waMwari.
Asi kuti ave mumufananidzo waMwari, Adamu aifanira kuva nehunhu hwechikadzi hwemukadzi wake waaizova naye (donhwe duku dema) mumweya wake wechirume. Nguva yakazouya mwenga wake, watinoziva nezita rekuti Eva, aizoiswa mumuviri wake ega wenyama. Asi izvi zvakazoitika kuna Genesisi Chitsauko 2.
Parizvino, kuna Genesisi Chitsauko 1, zvese mweya wemunhurume uye hunhu hwechikadzi zvaive mweya umwechete, waidaidzwa kuti Adamu.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomukadzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi munhu (Adamu), musi wavakasikwa.
Mwari akavasika kubva pasina. Ndicho chikonzero nei vaifanira kuva vanhu vemweya.
Nyama haina kusikwa nekuti yakaumbwa neguruva revhu.
GENESISI 2:7 JEHOVA Mwari akavumba munhu neguruva revhu,
Miviri yedu yenyama haina kusikwa nekuti yakaumbwa neguruva.
MuChitsauko 1 apo munhu akasikwa ari munhu wemweya, hakuna kubvira kwataurwa nezvematambudziko. Miti yese yaive yakudzwa nenyika yakataurwa ichinzi yakanaka pazuva rechitatu. Hapana muti wemuchero waive wakaipa kana wairambidzwa.
GENESISI 1:12 Nyika ikameresa vuswa nemirivo inobereka mbeu dzinamarudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, inamarudzi ayo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
GENESIS 1:29 Mwari akati tarirai; ndakakupai mirivo yose inobereka mbeu, iri panyika yose, nemiti yose inemichero yemiti inobereka mbeu; kuti zvive zvokudya zvenyu.
“Kuti zvive” zvakataurwa munezvinhu zvaizoitika. MuChitsauko 1, Adamu aive mweya usingaoneki waive usina basa nechekudya. Asi chiporofita ichi chaitaura nezvaizoitika muChitsauko 2 apo Mwari aizoisa mweya wemunhu mumuviri wenyama wakaitwa neguruva. Zvino Adamu aizorarama nekudya michero.
Mwari akamupa mvumo yekudya kubva pamiti yese. Hakuna muti waive wakaipa waive nemuchero usingabvumirwi kudya. Pavakazoiswa mumiviri yenyama chete ndipo pavakazoyambirwa pamusoro pemuti wekuziva. Saka uyu waisazova muti wakafanana neimwe miti.
Asi chivi ichi chaisazoitika hunhu hwechikadzi huchiri kurarama muna Adamu. Saka kwaive kusina yambiro muChitsauko 1. Zvinhu zvose, kusanganisira miti yose, zvaive zvakanaka.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura, akati kwavari: zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga, kana asingaoni baba vachichiita; nokuti zvose zvavanoita ivo, Mwanakomana unozviita saizvozvo vo.
Mweya wemunhu ndiwo unotonga kuita kwemuviri wake. Mwari akatanga kugadzirira mweya waAdamu kuti agova munhu anofunga zvakanaka. Mwari apedza izvi ndipo paaizouisa mumuviri wenyama.
Mhuka dzakabva dzangotanga dziri mumiviri yadzo yenyama. Dzairarama nekuziva kwakasikwa kuri madziri. Ndicho chikonzero nei mhuka dzinoita zvinhu zvichifambirana nemasikirwo, uye dzichibatsira kuvaka nzvimbo yadzinogara. Hazvijairiki kuti mhuka “dzakafushirwa” muvhu, hutachiona, masvosve, majuru, nemanyongorosi dzizvo zvinobata basa zhinji pakugadzira ivhu kuitira kuti zvese zvinomera zvikure.
Munhu aive akasiyana. Mwari vakamupa simba rekuzvisarudzira. Saka Mwari aimudzidzisa kuti anozoshandisa sei pfungwa dzake zvakanaka kuti Adamu anozoziva kuti angadzore sei muviri waaizova nawo. Adamu akadzidza zvidzidzo izvi kuti Satani asazomunyengere. Ndicho chikonzero nei Satani akaisa kunyengera kwake pamukadzi.
I TIMOTIO 2:13 Nokuti Adamu wakatanga kuvumbwa, tevere Eva.
14 NaAdamu haana kunyengerwa akapinda pakudarika.
Jesu aive munhu, akaitwa nenyama. Anodaidzwa kuti Mwanakomana waMwari. Ndiye Muviri wenyama unogara kuzara kwehuMwari. Mweya unogara maari unotonga Muviri wake wenyama zvakazara.
Mwari haasi wenyama, sezvo Mwari ari Mweya. Saka Jesu haana kubvira adaidzwa kuti Mwari Mwanakomana.
JOHANE 14:10 Hautendi here kuti ndiri munaBaba naBaba vari mandiri? Mashoko andinoreva kwamuri handimarevi pachangu; asi Baba vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo.
Muna Jesu, Mwari akava Munhu. Mwari akararama hupenyu hwake ari mukati meMuviri waJesu, aive Mwanakomana waMwari. Nenzira iyoyo Mwari akatiratidza kuti aida kuti isu vanhu tirarame nenzira ipi.
II VAKORINTE 4:11 Nokuti isu vapenyu tinogara tichingoiswa pakufa nokuda kwaJesu, kuti novupenyu vo bwaJesu bwuratidzwe munyama yedu inofa.
Nerubapatidzo rweMweya Mutsvene, Jesu anoda kurarama mumiviri yedu orarama hupenyu hwake kupfurikidza nesu.
Ipapo chete ndipo patinokwanisa kuva vanakomana kana vanasikana vaMwari.